Kase – ICT.com.mm
Kase 1.33X Wide Screen Mobile Anamorphic LensK202,000 K162,000-20%
Kase 12mm Master Wide Angle LensK234,000 K187,000-21%
Kase 15mm Master Wide Angle LensK413,000 K330,000-21%
Kase 16mm Wide Angle LensK427,000 K342,000-20%
Kase Fashion2in 1 Lens KitK158,000 K126,000-21%
Kase 1.33X Wide Screen Mobile Anamorphic Lens
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Everyone can make film easily with Kase 1.33x Anamorphic lens. 2.4:1 cinematic scale.2clips can fits all type of smartphones. ll lenses made of high quality...
Kase 12mm Master Wide Angle Lens
Kase 15mm Master Wide Angle Lens
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Lens For Smartphone Optical Glass Multi Layer Coating 15mm Wide Angle
Kase 16mm Wide Angle Lens
Kase Fish Eye Lens ll
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ With an angle of 238 degrees, Kase fish eye lens II can captures images that go far beyond the field of view. Full screen, no dark corner....
Kase Huawei Mate 20 Case
Kase Huawei Mate 30 Case
Kase Huawei P40 Case
Kase Huawei P40 Pro Case
Kase iPhone 11 Case
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Kase ကနေ iPhone 11 Series ဖုန်းတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Phone Case အနေနဲ့ရော CPL Filter ၊ 10x Macro Lens နဲ့ Fisheye Lens တွေပါဝင်တဲ့အတွက် တစ်မျိုးဝယ်ယူပြီး ၄ မျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Lens တွေကို သီးသန့်သယ်သွားဖို့မလိုအပ်တဲ့အတွက် Mobile...
Kase iPhone 11 Pro Case
Kase iPhone 11 Pro Case With Lens
Kase iPhone 11 Pro Max Case
Kase iPhone 6+/6S+ Case
Kase iPhone 6/6S Case
Kase iPhone 7+/8+ Case
Kase iPhone 7/8 Case
Kase iPhone X/XS Case